WEB Gaashaanbuurta lagu sharaxay Khariidadda Islamabad Khabiir
Milkiilayaasha bogga intarnetka ee eCommerce, kantaroolka Mashiinka Search Engine waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee suuq-geynta suuqa . Tusaale ahaan, dadku waxay shaqaaleeyaan tabaha sida mashiinka raadinta si loo maareeyo loona kormeero booqdayaashooda goobahaas. Goobahaasi waxay booqdaan bogagga internetka waxayna soo booqdaan macluumaadka ku jira boggooda internetka - revista de fotografia digital online photo. Inta badan mashiinka search engine crawler wuxuu ku shaqeeyaa shuruudaha ku jira buuggan SEO ee uu bixiyay Michael Brown, khabiir sare oo ka yimid Semt .
Si aad u muujisid guud ahaan boggaga internetka, xirmooyinka ku dhex jira shabakadaha raadinta oo dhan waxay u shaqeeyaan si waafaqsan "htacccess.file" ee ku jira faylkaada boggaaga. Dadka leh lahaansho boggaga internetka ee eCommerce, waxaa jira marar badan oo ay kooxuhu yimaadaan si ay u qaadaan tallaabooyin kala duwan oo loo siman yahay isla'egta fulinta kaalinta Baaritaanka Qalabka Baadhitaanka
Si loo soo bandhigo macluumaadka laga helo boggaga internetka, makiinadaha raadinta waxay ku shaqeeyaan booqasho ku-salaysan si aad u hesho boggaaga. Goobayaasha shabakada waxay leeyihiin awood ay ku tagaan goobta oo ay ku muujinayaan dhamaan bogga internetka. Hase yeeshee, gawaarida raadinta ayaa leh awoodda
Sida loo baadho qashin-baarista
Mashiinka raadinta mashiinka shaqada sida barnaamijyada soo dejinta xogta sahlan. Dad badan ayaa laga yaaba in ay is waydiiyaan waxa caaro raadin iyo sida wakiillada soo noqoshada u shaqeeyaan..Tusaale ahaan, qatartu waxay akhrin karaan oo heli karaan macluumaad badan oo ku jira shabakada raadinta muddo dheer. Sidoo kale, waxay sidoo kale ka caawiyaan abuurista diiwaanka raadiyaha raadinta, halkaas oo su'aalo kala duwan ay soo saaraan SERPs
Waa lagama-maarmaan in la hagaajiyo boggaaga si aad u hesho natiijooyinka raadinta badan ee suurtogalka ah. Tusaale ahaan, dadku waxay dhigayaan faylka robots.txt oo ku yaal liiska xididka ee bogga internetka. Mar kasta oo kuwan xitaa soo booqdaan shabakadaada, waxay raadiyaan faylkaas ujeeddooyinka muujinaya. Waxay mar dambe ururiyaan macluumaadka ku darsamaya xogta macluumaadka mashiinka raadinta. Marka hawshani dhammaato, natiijooyinka raadinta waxay diyaar u yihiin dadka inay raadiyaan oo ay helaan.
Xaaladaha qaarkood, Kootada Mashiinka Mashiinka ayaa laga yaabaa inaysan awoodin inay helaan barta internetka. Xaaladdan, boggaaga waxaa laga yaabaa inuu leeyahay qaybo aan laga heli karin si loo muujiyo. Xaaladdani waxay ka dhigi kartaa aag lumin karo darajooyinka mashiinka raadinta.
Sidee baaskiilku u shaqeynayaa
Mashiinnada raadinta waxay ku xiran tahay waxa caaro-raadinta (raadinta) raadinta ka helayaan raadintooda. Tusaale ahaan, marka website cusub uu diiwaangeliyo raadinta, website-ka raadinta raadinta waa in la ogaadaa dhammaan macluumaadka la heli karo si loo muujiyo. Xeerar dhowr ah oo ku jira faylka robots.txt wuxuu ka caawiyaa fulintiisa. Laga soo bilaabo database, shabakada raadinta raadinta waxay awoodi kartaa inay fuliso hawlo kala duwan waxayna keenaan natiijooyin raadin badan oo loogu talagalay ereyada muhiimka ah.
Websiyo badan oo eCommerce ayaa ka faa'iideysanaya helitaanka istiraatiijiyada suuq-geynta internetka. Tusaale ahaan, dadku waxay sare u qaadaan boggooda si ay u muujiyaan shabakadaha wax raadinta sida Google. Search Engine Kootaroolidu waxay ka caawisaa fulinta ficillada internetka ee noocyada kala duwan ee badan oo ka mid ah shakhsi ahaaneed. Intaa waxaa dheer, dadku waxay weli ka faa'iideysan karaan awoodda ay u yeelan karaan boggooda internetka iyo waliba dhinacyo kale oo suuq geynta ah. Maqaalkan SEO wuxuu ku bari karaa waxa isku xira shabakadaha raadinta iyo sida ay ufududayaasha webka ku gaareen hawlahooda. Waxaad sidoo kale ogaan kartaa sida website-yada search engine u isticmaalaan macluumaadka laga soo bilaabo bots si loo abuuro xogta SERPs.